နည်းပညာ | Nanyaaung's Blog
Gtalk မှာအမြဲတမ်း IDLE ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်ရင်
J bonjovi …. Alway
Taylar Swift – hey stephen
Fiona Fung – Proud Of You
That’s When I Love you – Aslyn
ပြန်တွေးကြည့် – မိုးမိုး
“when you’re gone” by Cranberries
UMBRELLA : Jay; Z & Rihanna
You’re Beautiful lyrics by jame blunt
အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
Shockwave Flash ဒေါင်းလုပ်
DVD ကနေ VCD ပြောင်းတဲ့ Software
LAN HACKING အခြေခံလေးများ
Phzilla add-on သုံးပြီး ကျော်ကြည့်ရအောင်
Pes 2010 အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း
Pes2010 BGM (how to create background music)
PRINCE OF PERSIA(forgotten send) Save File
internet lock ဆိုသည်မှာ
Internet lock သည် specific computer တစ်လုံးစီမအတွက် ip address, domain , specific web , port စသည်တို့ကို လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ်နိုင်သော software တစ်ခု ဖြစ်သည်။ internet အသုံးပြု software များကို password ခံ ၍အသုံးပြုနိုင်သလို ၊ လုံးဝ ပြတ်တောက် အောင်လဲလုပ်ထား နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ download trial ရယူပါ။
၀ယ်ယူသုံးမှသာ full version ရပါမယ်။
“gtalk” မှာ စာလုံးမည်း “bold” စာလုံးဘယ်‌လိုရေးမလဲ။
“gtalk” ရဲ့မူရင်း setting မှာ စာလုံးတွေ၊စတိုင်တွေ၊ကာလာတွေ ပြောင်းလဲ သုံးဖို့“setting” ပေးသုံးထားတာမရှိပါဘူး။
ဒီတော့ ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေ bold တင်‌ချင်တဲ့ အခါ စာလုံးရဲ့အစနဲ့အဆုံးတွေမှာ “*” လေးထည့်‌ပေးလိုက်‌ရုံပါပဲ။ သင်နဲ့chat နေတဲ့လူ က လဲ စာလုံးမည်းမည်းကြီးပဲ မြင်ရမှာပါ။
ဥပမာ။ သင်က *heyyy…how are u* လို့ ရိုက်‌လိုက်‌ရင်‌ gtalk chat box မှာ heyyy…how are u
လို့ ပေါ်ပါလိမ့် မယ်။
gtalk မှာမှ စာလုံးကို စောင်း ချင်တာ
ဒီတခါ gtalk chat box မှာ italic ရေးနည်းလေး ဖော်ပြပါမယ်။ bold” လိုပါပဲ။ အသုံးချရတဲ့ key symbol လေးပဲကွာသွားတာပါ။ ဒီလိုရေးကြည့်လိုက်…
_ heyy how are u_ လို့ ရိုက်‌လိုက်‌ရင်‌ gtalk chat box မှာ heyyy…how are u
လို့ ပေါ်ပါလိမ့် မယ်။gtalk နဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
chat ပုန်းများ အတွက်နေရာမရှိတော့ ဘူးဗျို့ 
ကောင်းပါပြီ..နောက်တစ်ခုကတော့ သင့်မိတ်ဆွေ က invisible လုပ်‌ထားတာကိုများ သံသယ ရှိရင် သိအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပါ။ ကဲ ……… လူမြင်မခံချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဖမ်းရအောင်။ 😀
ပထမဆုံး သင်သံသယရှိတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့chat box ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ နောက် သူရဲ့chat box မှာ Go off the record လုပ်‌လိုက်‌ပါ။
နောက်ပြီး chat box ထဲကို သင်‌နှစ်သက်ရာရိုက်ထဲ့ လိုက်ပါ။ ဥပမာ..heyy…I bet u are invisible
အဲဒီနောက် ခန အတွင်းမှာxxxxxxGmail.com cannot receive your message now ပေါ်လာရင်တော့ သင့်သူငယ်ချင်း တကယ်မရှိပါဘူး။ off record လေးပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်နော်။ 😛
တကယ်‌လို့ဘာမှပေါ် မလာရင်တော့ “ ha ha Gotcher!” လို့ ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဗျာ ။ ။
၁။ “about:config” လို့address bar မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ warning box တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ ဂရုစိုက်လုပ်ပါ့မယ်လို့ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ broswer ရဲ့ အောက်ကိုဆင်းကြည့်ပြီး အောက်ပါ entries များကိုရှာပါ။
“network.http.pipelining” ကို “true”
“network.http.proxy.pipelining” ကို “true”
“network.http.pipelining.maxrequests” value ကို 30 လို့ ပြင်ပေးပါ။ အကြိမ်သုံးဆယ် တပြိုင်နက် resquest လုပ် မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
၃။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့browser အတွင်း ကြိုက်ရာနေရာမှာ right click နှိပ်ပါ။ New->Integer ကို”nglayout.initialpaint.delay” လို့ အမည်ပေးပြီး value ကို “0” ပေးပါ။ဒီ value က browser ကို
receive information လက်ခံမဲ့ delay time ပါ။သင်သာ brodband connection ကိုသုံးတာဆို ရင် page loading ဟာ ၂ ဆ ကနေ ၃ ဆ ထိ မြန်လာပါမယ်။ ။
Account tab မှ manage Accounts ကို click လုပ်ပါ။Account box
ပေါ်လာပါမည်။နောက် Account box မှ Add ကိုနှိပ် ပါ။ Add Account box
ပေါ်လာပါမည်။အောက်ပါအတိုင်းရွေး (သို့ ) ရိုက်ထည့်ပါ။
Protocol: XMPP ကိုရွေးပါ
Username: your gmail id ကိုဖြည့်ပါ။
Domain: gmail.com ကိုဖြည့်ပါ။
Resource: Home ကိုဖြည့်ပါ။
Password: your gmail password ကိုဖြည့်ပါ။
o Remember password
Local alias: your nick name နှစ်သက်ရာရွေးပါ။
o New mail notification
o Use this buddy icon for this account
Force old (port 5223) SSL ကိုရွေးပါ။
Connect port: 443 လို့ ဖြည့်ပါ။
Connect server: talk.google.com လို့ ဖြည့်ပါ။
Proxy type: HTTP ကိုရွေးပါ။
၃။ အနီနှင့်ပြထားသည့် host,port,Username and Password တို့ မှာမိမိတို့ သုံးနေသော protocol and proxy setting အားဖြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
မလုပ်တတ်ပါက proxy type တွင် “Use Global Proxy Settings” ကိုရွေးပေးပါ။
ပြီးလျှင် save ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါဆို gtalk ဟာ pidgin မှာ active ဖြစ်ပါပြီ။
buddy list ဆိုတဲ့ box မှာ gmail account တွေပေါ်လာပါမယ်။
၄။ ဆက်ပြီး block လုပ် ထား၊မထား ကိုကြည့်ရအောင်။Pidgin Buddy List မှာရှိတဲ့ account list ထဲက တစ်‌ယောက်‌ယောက်‌ ကို right click လုပ်ပြီး Get info ကို နှိပ်ပါ။
Online မတက်လို့ offline ဖြစ်နေတာဆိုရင်account ရဲ့profile နှင့် photo ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဘာမျှမပေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ်၊ သင် block လုပ်တာခံထားရပါပြီ။ ။
Always Idle :
နောက် အကြောင်းအရာတခုကတော့ gtalk မှာ (always idle ) ဘယ်‌လိုလုပ်‌ရမလဲ ဆိုတာပါ။ သင်‌ စကားမပြောချင်‌သူတွေကို တုံ့ ပြန်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းလေးပါပဲ။ ဒါလဲ ဒေါင်းလုပ်ချရမှာဖြစ်ပြီး (118) kbytes ပဲရှိပါတယ်။ ခဏပါပဲ။ Link ကတော့ http://www.galwaysidle.com/download.html ပါ။ကြိုးစားကြည့်ပါဦး။
Internet explorer သုံးတဲ့အခါမှာ web site အချို့ ကို (ဒါမှမဟုတ်) အားလုံးကို block လုပ်ထားချင်တဲ့အခါမှာ ဒီနည်းလေးက အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ Internet Explorer ကိုဖွင့်ပါ။
Internet Explorer>Tool>Internet Option>Connection>Lan setting ကိုအဆင့်ဆင့်ဝင်ပါ။
ထို့ နောက် Useaproxy server for your Lan ကို check လုပ်ပါ။
HTTP: တွင် nowhere ကဲ့သို့ သောInternet address တကယ်မရှိနိုင်သည့် စာလုံးအချို့ ရိုက်ထည့်ပါ။ အဲဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်တာဟာ Internet Explorer ကိုတကယ်မရှိတဲ့ proxy server ကိုသုံးခိုင်းလိုက်တာပါ။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Internet Explorer သည်‌မည်‌သည့်‌ site ကိုမျှ ဖွင့်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ထို့ နောက်‌ Use the same proxy server for all protocols ကို check လုပ်ခြင်းဖြင့် web site ကိုသာမက FTP ( file transfer protocols) ကဲ့သို့ သောအခြား services များကိုပါ ချိတ်ဆက်မရအောင် ဟန့် တားထား နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ အပြင် သင်ဆက်သွယ်ခွင့် ပြုချင်သည့် အချို့ web site များကိုဘယ်လို ခွင့်ပြုပေးရမလဲဆိုတာ ဖေါ်ပြပါမယ်။
Expection ခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်မှ Do not use proxy sever for addresses beginning with: box ထဲတွင် မိမိချိတ်ဆက်လိုသော web addresses များကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ဥပမာ။ ။ http://www.yahoo.com ; http://www.oreilly.com…စသည်တို့ အား expections box တွင်ရိုက်ထည့်ထားပါက ယင်းweb site များမှအပ ကျန်web site များကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ။
Internet Explorer မှာ မြန်မာဖောင့် ကြည့်လို့ရအောင်
Zawgyi-One font အရင် Install လုပ်ထားပါ။
၁. IE ကိုဖွင့်ပါ။
၂. Tooles —– Internet Options နှိပ်ပါ။
myanmar font for IE
၃. General Tab အောက်က Fonts Button ကို နှိပ်ပါ။
၄. web Page Font အောက်မှာ Zawgyi-One ဖောင့်ပြောင်းပေးပါ။
၅. Ok နှိပ်လိုက် ပါ။
Apr 28, 2010 @ 15:15:28
🙂 i think u r chat guru
Apr 29, 2010 @ 12:04:46
ကျွတ်ကျဲအောင် စွတ်စွဲနေပါတယ် ဗျို့။
လာရောက် အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရေ။
Oct 08, 2011 @ 14:44:52
A kon tha ma twar par tal
Jan 29, 2012 @ 20:54:51
နန်းရအောင် blogspot နန်းရအောင် blogspot 0